Tsy mahadini-tena, ka tsy mahita ny hafa… | NewsMada
Tsy mahadini-tena, ka tsy mahita ny hafa…
Anisan’ny mampiavaka izao fitondrana izao ny tsy fiaikena fahadisoana: lehibe tsy meloka, tsy mba diso. Ailika amin’ny hafa hatrany ny fahadisoana sy ny tsy fahombiazana amn’izay atao. Ailika amin’ny mpitondra teo aloha izany, na amin’ny mpanohitra; eny, na amin’ny vahoaka aza.
Tsy vitan’ny hoe tsy mahadini-tena amin’izany ny mpitondra; raha mba mandini-tena aza, mihevitra azy ho zavatra. Atao sy vitain’ny amin’izao fotoana izao izay tsy vitan’ny teo aloha nandritra ny 50 taona mahery; eny, na mifanohitra amin’izany aza ny tena zava-misy sy izay iainan’ny vahoaka.
Mampiavaka ny tsy mety diso koa ny fahalaniana henatra amin’ny lainga marivo tototra imasom-bahoaka? Toy ny hoe tsy nanao na inona na inona iny ny mpitondra teo aloha hatramin’izay, fa ny ankehitriny no tena zavatra sy varatra. Manelingelina amin’izany, hono, ny mpanohitra.
Tsy ny mpitondra aza ve no manelingelina mpanohitra? Tsy avela haka ny toerany banga eny anivon’ny Antenimierampirenena, ohatra. Izay mihetsika rehetra, soketaina avy hatrany ho manakorontana sy manongam-panjakana. Na ny fitakiana sosialy aza, mahafadiranovana amin’ny toerana…
Tsy miaiky fahadisoana, tsy mahadini-tena, tsy miala tsiny… Eo, ohatra, ny fanafoanana ny fahatapatapahan-jiro lava. Tsy foana tao anatin’ny telo taona izany, raha telo volana ny fanamby. Tsy misy fanazavana. Ny vahoaka indray no diso, fa tsy mora ny manao zavatra, mila faharetana…
Tsy ratsy? Tsy kely lalana fa mahita fialana sy fanilihana hatrany ny fahadisoa’ny tena: lehibe tsy meloka tsinona. Tsy mahagaga raha tsy mahita sy tsy mahalala izay tena iainan’ny vahoaka ifotony, izay mahamaika azy, ny hetahetany… Mitombo hatrany ny elanelana, ny tsy fifampitokisana…
Tsy mahadini-tena ka tsy mahita ny vahoaka? Na tsy mahita ny vahoaka ka tsy mahadini-tena… Tsy mahita ny fahadisoan’ny tena, ka manohy an-jambany hatrany… Mankaiza? Nefa izay tsy mijery arina an-tava no tsy te hanan-dratsy. Ny manan-dratsy no mahajery fotsiny, rehefa tsy avela hiteny.
Jerem-potsiny toy ny tany nahalavoana ny raharaha?